Freeing Mind: ရိုးရှင်းသွက်လက် မြန်မာ SMS
GSM ဖုန်းတွေမှာ SMS ကိုမြန်မာဘာသာ အသုံးချပြီး ပို့နိုင်တဲ့ Software နောက်တစ်ခုပါ..။ MySm ပြီးတဲ့နောက်မှာ ပေါ်တဲ့ Software ဖြစ်ပါတယ်..။ Software နာမည် sm3 ဖြစ်ပါတယ်။ အရှည်ကောက်က Simple Myanmar Message ပါ..။ Java ကိုအသုံးချ ရေးထားတဲ့ Software ဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ အတွေ့အကြုံရင့် Java Application Developer တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အဖွဲ့ကလေးကနေ တည်ထွင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုလိုတဲ့ GSM Phone မှာတော့ Java MIDP2 အနည်းဆုံး Support လုပ်ရပါမယ်..။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ MIDP2 ပေါ်မှာ အခြေခံပြီး ရေးထားတာ ဖြစ်လို့ပါ..။
ပို့လာမယ့် Message ကိုဖွင့်ဖတ်ဖို့အတွက် Software ကို အင်တာနက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် နီးစပ်ရာ ဖုန်းဆိုင်တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် အခမဲ့ရယူနိုင်တာကို သိရပါတယ်..။ ကုန်ကျစရိတ် မရှိဘဲ လက်ခံအသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် ရည်ရွယ်တဲ့အတွက် ဒီလိုဖြန့်ချီရခြင်းပါလို့ sm3 အဖွဲ့ဝင် သူငယ်ချင်းလုပ်သူက ပြောပါတယ်..။ အသုံးပြုသူအနေနဲ့ Message ပို့ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Code Activate ကို ၅၅၀၀ကျပ်သာ ပေးသွင်းရမှာဖြစ်ပြီး တစ်ကြိမ်သာ လုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်..။
မြန်မာစာလက်ကွက်စနစ်ကိုလည်း အလွတ်ကျက်ဖို့ မလိုအောင် လွယ်လွယ်ကူကူ အသုံးချနိုင်ဖို့အတွက် စီမံထားပါတယ်..။ အဲဒီနည်းပညာကို နှစ်နှစ်လောက်သုတေသနပြုလုပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်..။ M9 Input System လို့ခေါ်ပါတယ်..။ Register လုပ်ထားတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်..။ လက်ရှိ sm3 Center တွေက ရန်ကုန်မြို့၊ ဘုန်းကြီးလမ်းမှာရှိတဲ့ G-Shop၊ မန္တလေး ရတနာပုံဈေး စတုတ္ထထပ်မှာရှိတဲ့ Yadanabon Digitopia၊ မန္တလေး ၇၈ လမ်း ၂၆လမ်း ၂၇ လမ်းကြားမှာရှိတဲ့ Anycall ဖုန်းဆိုင်တို့ဖြစ်ပါတယ်။
sm3 နဲ့ software နဲ့ တွဲသုံးထားတဲ့ မြန်မာစာလက်ကွက်စနစ်က အောက်မှာ ပြထားပါတယ်..။ ဗျည်း၊ သရ ကို တစ်လှည့်စီ ရိုးရှင်းလွယ်ကူစွာနဲ့ အသုံးပြုရိုက်နိုင်အောင် စီမံထားပါတယ်..။
ဗျည်းအပိတ်စာလုံးတွေ ရိုက်ချင်ရင် အလယ်မှာဖိပြီးရိုက်လို့ရပါတယ်..။ ၀၊စ၊တ၊ထ၊ဓ စာလုံးတွေပါ..။ ရှေ့ဖွင့်စာလုံးတွေ ဥပမာ (ခ၊ဆ၊ဒ၊ဥ) တွေကို ၀ ကိုအခြေခံပြီး ရှေ့ဘယ်ဘက် နံပါတ် ၄ မှာ ရိုက်ရပါမယ်..။ ညာဖက်ဖွင့် စာလုံးတွေ (င၊န၊ဌ၊၏၊န) တွေကို Keypad နံပါတ် ၆ မှာ ထည့်ထားပါတယ်..။ တစ်ချက်စီရွေးပြီး ရိုက်သွားလို့ရပါတယ်..။ သရတွေကိုလည်း အဲဒီပုံစံအတိုင်း စီစဉ်ထားပါတယ်..။
အောက်မှထည့်ရမှာတွေ အောက်လက်ကွက် အပေါ်တင်ရမှာတွေက အပေါ်လက်ကွက် အဲဒီလိုမျိုးတွေပေါ့..။ အဲဒီလိုမှတ်ထားရတဲ့အတွက် ကွန်ပျူတာ မြန်မာစာလက်ကွက်တွေလို အလွတ်ကျက်စရာ sm3 Software ကို Smart Phone တွေမှာလည်း အဆင်ပြေပြေ သုံးလို့ရပါတယ်..။ Sony Ericsson ဖုန်းတွေမှာတော့ အခက်အခဲမရှိ သုံးနိုင်ပါတယ်..။ PDA Phone တွေကို Support မလုပ်ပေးနိုင်သေးသလို Samsung Phone တွေမှာလည်း အလုပ်မလုပ်နိုင်ပါဘူး..။
အောက်မှာပြထားတာတွေက Available ဖြစ်တဲ့ Model တွေဖြစ်ပါတယ်..။
2630 2760 2660 2626 2610 2310
3500 3110 3109C 3250 3230
5700 5070 5300 5300 5500 5140i
6555 6500S 6500C 6267 6120 6121C 6110N 6290 6086 6300 6288 6085 6151
6080 6136 6126 6070 6125 6103 6233 6234 6282 6280 6270 6111 6060
6230i 6021 6030 6680 6681 6101 6020 6670 6630
7900 7500 7390 7373 7370 7360
8600 8800S 8800
N77 N76 N93i N95 N75 N93 N73 N72 N92 N80 N71 N91 N90
K770 K850 K530 K810 K550 K220 K200 K320 K618 K800 K790 K510 K310
K610 K608 K750 K600
W960 W910 W580 W660 W880 W610 W888 W200 W830 W850 W710 W700 W300
W950 W810 W900 W550 W600 W800
Z320 Z250 Z750 Z310 Z558 Z610 Z710 Z550 Z525 Z530 Z300 Z520 Z800
V9 V8 V6 maxx V3 xx V3i V3x V3
Z8 Z6 Z3
L9 L7e L7 L6
BenQ-SIEMENS / SIEMENS **
E52 E81 E71 EF61 EF71 EL71 E61 EF91 EF81
C31 CL71 CF61 C81 CC75 CF110 C72 C75 CX75 CF75 CL75 CX70E
CX70 C65 CXT65 CX65
SL80 SL91 S81 S88 S68 SG75 SFG75 S75 SL75 SP65 SXG75 SF65
M81 ME75 M75 M65
(*) နဲ့ (**) ပြထားတဲ့ ဖုန်းတွေမှာ သက်ဆိုင်ရာဖုန်းရဲ့ Firmware (or) Software တွေပေါ်မှာ အနည်းအကျဉ်း ကွာဟမှု ရှိပါတယ်..။ ဖုန်းသွင်းလာတဲ့ နိုင်ငံ၊ ၀ယ်ထားတဲ့ နိုင်ငံတွေပေါ်မူတည်ပြီး Software ပြောင်းလဲမှု၊ အသွင်းခက်မှုတွေ ကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်..။ ဒီနေ့အထိကျွန်တော် ဖုန်းအလုံး ၁၀၀ကို စမ်းကြည့် ပို့ကြည့်ပြီးပါပြီ..။ များသောအားဖြင့် Nokia 6233၊ 6300 model တွေများပါတယ်..။ N Series တွေလည်း အသုံးများပါတယ်..။ Smart Phone တွေမှာ စိတ်ကသိကအောင့် ဖြစ်စရာလေးရှိပါတယ်..။ Message ၀င်လာရင် အသံသိပ်တိုးလွန်းနေတာပါ..။ ဒီအတွက် Message ၀င်လာတာကို သတိမထားမိနိုင်စရာ ရှိပါတယ်..။ Cable တပ်ပြီး သွင်းရမယ့် ဖုန်းတွေဖြစ်တဲ့ 2610 တို့ 6030 တွေမှာလည်း အလုပ်လုပ်ပါတယ်..။ sm3 အောင်မြင်ပါစေလို့ပဲ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်..။
Labels: Myanma, News, Technology
posted by BaganNat at 7:19 AM
Crack Version လေး မ ရှိဘူးလား :)
Thz for sharing. I'll try it.
DL လုပ်လိုမရဘူးခင်ဗျာ .. Question IE နဲ့လုပ်လဲ File not found တဲ့ Firefox နဲ့လဲအတူတူပဲခင်ဗျာ..."The file you requested does not exist.It may have been deleted or the URL is incorrect." အဲ့ဒီလိုပဲ ပေါ်တယ်ခင်ဗျာ။ကျနော် copy သေချာလုပ်ပြီးထည့်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လိုလဲမသိဘူး ပြန်ကြည့်ပေးပါခင်ဗျာ.... Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
DL လုပ်လို.မရဘူး corrupt
same;;;;; i also can~t DL
အားလုံးကပြောနေကြပြီ DL လုပ်လို့မရဘူးတဲ့။ကျွန်တော်လည်းအတူတူဘဲ ဘာဖြစ်လို့လဲ
ICT Zone said...
ိDL MA YA BU....:( BAL LO DOWNLOAD YA MA LAE.....